Ny hevitrao momba ny fialan-tsasatra tonga lafatra dia ny sakafo matsiro, ny fiantohana tsy misy adidy sy ny tora-pasika mahafinaritra? Raha izany dia, nankany St. Martin / St. Maarten dia fomba tena tsara handeha. Ataovy ao an-tsaina anefa fa ny nosy dia toerana fialantsasatra malaza ary ny sambo mpitondra lakana dia manao fijanonana tsy tapaka eto. Raha mitady fialokalofana ianao, lohan-toeran-kafa ... na farafaharatsiny amin'ny lafiny frantsay amin'ny nosy, izay mavesatra kokoa noho ny antsasany holandey.
Jereo ny St. Maarten / Martin ny tolotra sy ny fitsidihana amin'ny TripAdvisor
Toerana: Eo anelanelan'ny Ranomasina Karaiba sy ny Oseana Atlantika, atsimo-atsinanan'i Puerto Rico
Vita: 37 kilaometatra toradroa .
Capitals: Marigot (St. Martin), Philipsburg (St. Maarten)
Fiteny: Frantsay (St. Martin) sy Holandey (St. Maarten).
Fivavahana: Katolika sy Protestanta
Currency: St. Martin: euro; St. Maarten: Gilderina Antilles any Ginea. Dolara amerikana
Kodin'ny Faritra: St. Maarten, 599. Md Martin, 590
Tipping: 10 hatramin'ny 15 isan-jato
Toerana: Ny isam-bolana dia 80 degre. Tontolon'ny rivo-doza Jolay-Oktobra.
St. Maarten no hany nosy Karaiba misy tsena maimaim-poana 100%. Ao Philipsburg , orinasa maherin'ny 500 no mivarotra zavatra enti-madinika toy ny entana hoditra, elektronika, kamera, fitafiana akanjo, famantaranandro ary firavaka amin'ny fihenan'ny 25 ka hatramin'ny 50 isan-jato. Marigot, eo amin'ny lafiny frantsay, manolotra fihenam-bidy toy izany amin'ny solitany, kina, kristaly, firavaka sy akanjo.
Ny fanatanjahantena momba ny rano dia lehibe amin'ny lafiny roa amin'ny nosy, ary ireo mpandraharaha maro dia manofa sambo, manolotra alàlan'ny fanjonoana an-dranomasina, na fitaovana fanamafisana ny fandoroana, ny rano, ny rivodoza na ny kayak. Manana tranokala 40 eo ho eo sy misy snorkeling tsara ihany koa ilay nosy.
Ny tatitra dia miovaova amin'ny isa marina, fa ny rehetra dia manaiky fa mahafinaritra ireo tora-pasika fotsy amin'ny sisiny roa amin'ny nosy.
Ho fantatrao hoe iza ny antsasaky ny nosy misy anao amin'ny fitsipika akanjo - maotina amin'ny sisiny holandey, tsy misy topi-maso na tsy misy dikany amin'ny teny Frantsay. Ny tapakila ambony dia misy ny mullet Bay Beach sy ny Maho Beach, izay fantatra amin'ny fiaramanidina lehibe; Cupecoy Beach , misy fasika fotsy fotsy manohana ny hantsam-bato; ary Dawn Beach, fantatra amin'ny filentehany mahafinaritra. Orient Bay eo amin'ny lafiny Frantsay dia tora-pasika mitafy akanjo .
Fonenana ao amin'ny nosy dia megaresorts toy ny Sonesta Maho Beach ho trano fonenana kely toy ny The Horny Toad. Ny tahan'ny taha-be tapak'andro, midina avril ka hatramin'ny desambra, dia mety ho ny antsasaky ny tahan'ny mandritra ny fizaran-taona.
Toeram-pisakafoanana sy fiompiana
Ny sakafo dia tsy mijery lavitra kokoa noho ny raharaha Grand Martin ao St. Martin noho ny sasantsasany amin'ireo karazana fialana tsara indrindra sy betsaka indrindra any Karaiba. Ireto misy karazana tranom-barotra frantsay, italianina, Vietnamiana ary Andrefana. Andramo Il Nettuno raha toa ianao ka mahatsiaro ho italiana, na ny tsiro koban-dRamatoa Le Ti mena ho an'ny kreôla kreôla.
Kolontsaina sy tantara
Niorina tany amin'ny nosy ny Holandey sy Frantsay tamin'ny taona 1630 ary vetivety taorian'izay dia niray hery tamin'ireo mpanohitra Espaniola. Taorian'ny nahatratrarana io tanjona io tamin'ny taona 1644 dia nanaiky izy ireo fa hizara ny nosy, na dia tsy nisy naorina aza ny sisiny dia hatramin'ny 1817.
Androany no faritany kely indrindra eran'izao tontolo izao hanjakan'ny firenena roa tonta. Ny mpivarotra holandey holandey, frantsay, britanika ary ny andevo afrikanina dia samy nitondra ny fombany, ny kolontsainy ary ny fiteny rehetra.
Fety sy fety
Ny hetsika fanao isan-taona malaza indrindra any St. Maarten dia ny Karnaval , izay ahitana paradisa, izay tena mifanakaiky amin'ny fitsingerenan'ny Mpanjakavavin'i Beatrix ao Holandy, sy ny fifaninanana calypso ary ny fampisehoana tantara. Mitranga izany amin'ny faran'ny Aprily sy amin'ny voalohandohan'ny volana Mey. Mankalaza ny Fetibe ihany koa i Martin, saingy ny azy ireo dia atao mandritra ny Karemy. Ny Heineken Regatta tamin'ny volana Martsa dia fanatanjahantena ho an'ireo mpankafy yacht manerana izao tontolo izao.
Eto Martiniana, mitadiava barbelle be marenina miaraka amin'ireo andian-doko sy dihy folk-nokaramain'ny sasany amin'ireo tanàna lehibe kokoa. Barazy maro sy bistro no manana fampisehoana mozika mivantana, indrindra ny reggae na mpilalao piano.
Tsy misy filokana eo amin'ny lafiny Frantsay, fa ianao dia mahita ampolon'ny mpanao casinos amin'ny teny Holandey. Ny Casino Royale no lehibe indrindra amin'izy ireo. Bars maro, anisan'izany ny toerana fanaovana dihy Boo Boo Jam, mametraka ny fasika any Orient Beach.
Mamonjy torta an-dranomasina, toerana iray amin'ny fotoana iray
Aiza no ahitana ny Windsurfing tsara indrindra any Karaiba
Fampahalalana momba ny toetrandro momba ny vakansy Karibeana
St. Maarten / St. Martin: Kapitenin'ny Day of the Caribbean
Fialamboly miaraka amin'ny mpifindra monina any Karaiba
Mpilalao baolina kitra any Karaiba ao amin'ny faritra avaratra atsinanana
Sarintanin'ny Bay Chesapeake
Lisitry ny Radio FM any Minneapolis sy St. Paul
Top Free Things to Do in Columbus
Ny fanadihadiana dia milaza hoe: Ny ray aman-dreny tsy manambady no tena mampihetsi-po indrindra
Toerana ho an'ny Fialam-boly any Texas
10 Zavatra Atao Ao Porto Ho An'ny 10 Euro
Andron'ny fianakaviana ao Toronto
Saint André Bessette: Ilay Masina, Ny Fahagagana
Aiza no mihodinkodina any Phoenix sy Scottsdale?
Golf Travel Packing Tips